MW CMC Oo Shir Layeeshay Qaybtii 2,aad Ee Ardayda Lashaqaalaysiinayo - Cakaara News
MW CMC Oo Shir Layeeshay Qaybtii 2,aad Ee Ardayda Lashaqaalaysiinayo
Jigjiga(CN)Arbaco, 20ka January 2016, Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka Shir layeeshay muwaadiniinta waxbaratay ee lashaqaalaysiinayo wareega 1, aad qaybtiisii 2, aad islamarkaana shaqaalaysiintoodu ka socoto hoolka shirarka ee sayid maxamed cabdile xasan.
Madaxwaynaha oo booqday Goobta ay Shaqada shaqaalaysiintu kasocoto oo ay u dhanaayeen xafiisyadii shaqaalaysiinta iyo waliba ardaydii lashaqaalaysiinayay oo tiradoodu kabadantahay 3,000 oo ah heerka diploma ayaa khudbad qaali ah ka soo jeediyay islamarkaana ay aad ugu riyaaqeen muwaadiniintii shaqaalaysiintoodu socotay.
Hadaba, madaxwaynaha ayaa khudbadiisii ugu horayn kaga hadalay in qorshaha GTP2 uu yahay mid xooga lagu saarayo dhinaca xoojinta cududa shaqaalaha iyo shaqo abuurka bulshada deegaanka si looga baxo saboolnimada. Wuxuuna sheegay in sanadkan 2008TI lashaqaalaysiin doono muwaadiniin dhan 7,000 oo arday sidoo kalena shaqo-abuur loo samaynayo in kabadan 100,000 oo shaqsi.
Wuxuuna intaa kudaray in wareegii koobaad wajigiisa 1, aad mudo aad u gaaban lagu shaqaalaysiiyay arday tiradoodu dhan tahay 1,000 arday oo dhamaantood Degree Program ah,islamarkaana hada aan u wada fadhino oo ay socoto wajigii labaad oo lagu shaqaalaysiinayo arday tiradoodu ka badan tahay 3,000 oo ah heerka diplomaha laguna dhamaystirayo shaqaalaysiintooda isla maanta, waxa uuna madaxwaynuhu amaanay xafiisyada ku hawlanaa shaqaalaysiinta iyo waliba gudiga shaqaalaysiinta ee uu hogaaminayo madaxwayne ku xigeenka ahna madaxa xarunta dhexe ee XDSHSI mudane Cabdicasiis Maxame Cabdi.
Ugudanbayna, madaxwaynaha ayaa ardaydan kula dardaarmay in qof kasta uu ku qanco booska iyo goobta lagu shaqaalaysiiyo maadaama oo si cadaalad ah ay u socoto shaqaalaysiintu qofkastana lagu meelaynayo boos waafaqsan aqoontiisa iyo waliba heerka shahaadadiisa, islamarkaana ayna jiri doonin garab iyo ninjeclasi. waxa uuna ku baraarujiyay ardayda in aduunyada qofna uusan shaqo meel sare ka bilaabin laakiin qofkasta daacadnimadiisa iyo shaqo wanaagiisa uu ku gaadho meel sare, sidaas darted waa in muwaadin kasta oo waraaqdiisa ogta ah qaatay uu si daacada oo muwaadinimo leh uu shaqadiisa uga soo baxaa uguna shaqeeyo bulshada.
Dhinaca kale ardaydii lashaqaalaysiinayay ay si farxadi ku dheehantahay ugu riyaaqay qaab shaqaalaysiintan cusub ee aan horay loo arag uguna mahad celiyay madaxwaynaha iyo XDSHSI. Waxayna balan qaadeen inay waajibaadkooda shaqo uga soo bixi doonaan si wadaniyad iyo daacad nimmo ku dheehan tahay